Sacuudiga oo lagu Eedeeyay Tacadiyo ka dhan ah Somalida dalkeeda ku Nool – Radio Daljir
Maajo 10, 2015 5:01 b 0
Axad, May 10, 2015 (Daljir) — Warbixin ay soo saartay hay’adda u dooda xaquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa waxaa ay sheegtay in dawlada Sacuudiga ay ka mid tahay dawladaha sida weyn ugu xad gudba dadka magangalyo doonka ah ee dalkeeda ku nool.
Hay’adda Human Rights Watch waxaa uu sheegtay in ciidamada Sacuudiga ah si arxan darro ah ula dhaqmaan marka ay qabtaan dadka magangalyada wadankeeda ka doonta ee Soomaalidu ka mid yihiin.
Madaxa hay’adda Human Rights ee bariga dhexe iyo waqooyiga Africa haweeneyda la yiraahdo Sarah Leah Whitson ayaa sheegtay in dawlada Sacuudiga ay xabsiyadeeda ku jir disho dadka ay Soomaalida ka mid yihiin ee ay magaalooyinka ka qabtaan isla markaana ay dib ugu celiyaan Soomaaliya oo aan amaan aheyn.
“Xad gudubyada dawlada Sacuudiga waa kuwa aad u culus xabsiyada dadka waa lagu jir dilaa kadibna dib ayaa dalalkooda loogu celshaa ayagoo aan amaan aheyn wadamadaas Soomaaliya ayaa ka mid ah” ayay tiri Sarah Leah Whitson.
Warbixinta hay’adaan kasoobaxday oo 60 bog ka kooban ayaa waxaa lagu sheegay in inta dadka la ururinayo ay dadka qaarkis xabsiyada waqti badan ku jiraan waxaana ay hay’addaan ku doodaysaa in sharciyada dawlada Sacuudigu u adeegsado ay yihiin kuwa khilaafsan xeerka ama sharciyada dunnida ee ka degsan qaxootiga dunnida
Soomaalida u shaqo doonata Sacuudiga oo dalkaasi ku taga si adag ayaa la kulma dhibaato adag oo ay ka mid yihiin jir dil, xarig joogto iyo in si dhaqso ah loo soo tarxiilo.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland Eng. Camey oo dib ugu soo laabtay Caasimadda Puntland ee Garoowe